US-Mexico Potato Hondo Haisi Kupfuura Izvozvi - Potatoes News
Hondo yeUS-Mexico mbatatisi haisati yapera izvozvi
Paive nemufaro wakanyanya musi waApril 28, apo varimi vembatatisi vekuUS vakanzwa danho nedare repamusoro reMexico rekuvhura nyika iyoyo kuti vatengese kunze kwenyika mbatatisi kubva kuUnited States. Asi izvi zvino zvafa zvishoma. Vatungamiriri veIdaho neUS maindasitiri maindasitiri vanofungidzira kuti boka rinomiririra indasitiri yembatatisi yeMexico inogona kunge iri kuedza kukanda mugwagwa unogona kudzora kana kumisa kupinzwa kwematata eUS munyika.
Dare Repamusorosoro reMexico rakapa mutongo wa5-0 Kubvumbi 28 kupidigura danho ra2017 rakatadzisa hurumende yemexico kubva mukuita zviga zvekubvumidza kuunzwa kwembatatisi nyowani dzeUS munyika yese.
Mbatatisi nyowani kubva kuUS parizvino dzinongobvumidzwa mukati memakiromita gumi nematanhatu pamuganhu weUS-Mexico. Kuwana mukana wekuwana mbatatisi nyowani kuMexico yese, iyo ine huwandu hwemamirioni zana nemakumi matatu, yanga iri imwe yezvinonyanya kukosha muindasitiri yematapiri kweanopfuura makumi maviri emakore.
Nguva pfupi mushure mekutonga kwakawiriranwa nedare repamusoro reMexico, murimi wembatatisi weAmerican Klaren Koompin akati nhau idzi dzainakidza asi ainetsekawo kuti indasitiri yematapiri yeMexico yaizowana imwe nzira yekunonoka kuvhura nyika kuti itengese kunze kwembatatisi kubva kuUS.
Kutya kwaKoompin nevamwe varimi vembatatisi veUnited States kuti indasitiri yepeputi yeMexico yaizowana imwe nzira yekurerekera hondo ichivada, zvinoita kunge vakapfeka miviri kana kuti vatotanga.
Munguva yeIdaho Potato Commission yemusangano wenguva dzose wemwedzi nemwedzi Chivabvu 19, vatungamiriri vemaindasitiri vakazivisa kuti National Confederation of Potato Growers yekuMexico (CONPAPA) yakasvika muchibvumirano neDare Repamusorosoro reMexico izvo zvinozokonzeresa hafu yemasampuli akatorwa kubva mukutumirwa kutsva kwembatatisi dzeUS. kune rabhoritari yakasarudzwa neCONPAPA kuti iongororwe. Iyo imwe hafu ichaenda kubazi rinotarisirwa nehurumende.
Izvi zvinoreva kuti CONPAPA, iyo inokwikwidza ichikwikwidza neindasitiri yematapiri yeUS, ichave neruoko rwakanangana nekuongorora zvitengeswa zvembatatisi zveUS uye zviri kunetsa zvikuru nhengo dzeUnited States 'mbatatisi indasitiri.
Maindasitiri embatatisi eMexico anogona kunge achiisa nzira
Tags: MekisikoVarimi vembatatisimusika wembatatisiUSA
Varimi vembatatisi muNyandarua, Kenya kunyoresa uye kuumba mapoka ekutengesa